Literature/Books » ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ စက်ဝိုင်းများ (၁)	23
ခင်ဇော် says: ဟင့်အင်းးး
kyeemite says: .Proactive သမားဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်..အဓိကအချက်က“သူများ ဝေဖန် ကဲ့ရဲ့ခြင်းမှာ ခံစားမလွယ်
.ဒေါ်စုလည်း Proactiveသမားဆိုတာအသေအချာမြင်နေရပါတယ်..လေးစားပါတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: Preactive :P
aye.kk says: မြစပဲရိုး
kyeemite says: .ဒီမနက်ပဲ fb က Black & White Photo Challenge မှာ ဒေါ်စုပုံတင်လိုက်သေးတယ်…သူဟာကျုပ်တို့ရဲ့
surmi says: ဆက်လက်ပြီးစောင့်မျှော်နေမယ်အရီးရေ …
Iris says: အရီး အရမ်း ကြိုက်​ပါတယ်​။ proactive ငယ်​ငယ်​က​တော်​​တော်​ဖြစ်​တာ။အခု​တော့။ reactive နဲ့ recovery မှာနပမ်းလုံး​နေရတယ်​။ ​သေ​သေချာချာပြန်​ဖတ်​အုံး အခုအလုပ်​ထဲမှာ မို့လို့။
Iris says: ဟီးဟီး ​သေ​သေချာချာ မဖတ်​ပဲနဲ့ အလုပ်​အ​ကြောင်းစဉ်းစားပြီး​ရေးလိုက်​လို့ ​ပေးချင်​တဲမတ်​​ဆေခ်ျ့​နဲ့ ​ကော်​မန့်​နဲ့​တော့လွဲပါပြီ။ :'(
ကန္နားစီး မိဂီ says: အောင်းမြလေးဟဲ့
မြစပဲရိုး says: ဂီဂီ
She isareason why I am here. Habit နံပါတ်(၁) နဲ့ တင် လုံလောက်မှာပါ။
Yae Myae Tha Ninn says: တော်တော်ကြီးကို သဘောကျသွားပါတယ်… :D
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: နောက်တစ်ပိုင်းကို ဆက်ဖတ်ရန်အသင့်
မြစပဲရိုး says: ဇီဇီ၊ မိုက်မိုက်၊ ကြားကြား (ဖိုးသကြား)၊ ကေကေ (အစ်မအေး)၊
kai says: ဆက်သာတွန်းအရီးလတ်ရေ…
မြစပဲရိုး says: ဝင်မန်း (မန့် မဟုတ် ) ပေးလို့ ကျေးဇူးပါ သူကြီးမင်းရှင့်။
မြစပဲရိုး says: လောင်းများလောင်း ဖြစ်ခဲ့ရင် နိုင်ခြေဘဲ။ :D :-)))
kai says: ကိုယ်ဖာကိုယ်လောင်းမယ်ပြော…။
ကောင်းပါလေ့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: အမြဲ ဆာလောင် ပြီး ရူး နေတဲ့ အရူးမ ဆိုတော့ အသာသာ ကြည့် နေပေါ့ သူကြီးမင်းရာ။ မဟုတ်လား။ :D :-))))) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 45
မစုဥာဏ် says: “စိတ်ခံစားချက် ကို ရှေ့မထား ဘဲ စိတ်ခံစားချက် ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု မခံဘဲ လက်တွေ့ကျကျ လုပ်သင့်တာ လုပ်ပြီး အဲဒီ ခံစားချက် ကို ထိန်းကျောင်းနိုင်ဖို့ ” ဆိုတာ အင်မတန် ခက်ခဲတဲ့ အလုပ်တစ်ခုပါ။
uncle gyi says: ဒေါ်စုကProactive သမား
ဦးကြောင်ကြီး says: .. ဘွားဒေါ်ဂျီးက လေ… ပြောလို့ချည်း နေတာပဲ.. ဘာတခုမှလဲ မဖြစ်လာ
padonmar says: Reactive ပဲလို့ ကိုယ့်ဖာသာ ၀န်ခံပါတယ်။
uncle gyi says: ဘာသာရေးကွန်ဆာဗေးတစ်တွေကို. လူထုက.. ဒေါ်စုက..မချိုးနိုင်ရင်..